Free online ọrụ. Gwupụtara, earthworks
Na ngụkọta oge nke olu nke earthwork ogwugwu onu maka
Dee akụkụ mita
Ngụkọta oge nke olu nke earthworks
B - omimi nke ogwugwu onu
Y - na ogologo nke olulu
X - obosara nke olulu
Ewu earthworks - na-na-egwu ala ntọala olulu, igwu mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri, a trenchi maka kwurula mba ụlọ siwa, drainage usoro mmiri ma ọ bụ obi.
N'ịhazi ogwugwu onu dị ezigbo mkpa na-amata olu nke gwupụtatụrụla ala.
Ndị na-eri ogwugwu onu mejupụtara ogwugwu onu nke trenches na ma ọ bụ mwepụ nke ala. Ọ dị mkpa ka atụmatụ ije nke topsoil oyi akwa nke ụwa ga-eme n'ọdịnihu eme ihe ubi ma ọ bụ n'ogige. Infertility nke ala ji mee ihe maka leveling saịtị, nzaghachi eji ehi ura ntọala ma ọ bụ na-e oyi-saịtị. Ebe mwepụ nke ala kpebisiri ike n'ọdịnihu.
Ọzọkwa mara na ụgwọ maka igwu ala nke 1 cubic mita mgbe enwekwu na omimi nke na-arụ ọrụ. Ebe ọ bụ na price si n'elu na omimi nke 1 mita na 1 mita miri emi ma na ike ịdị iche iche ọbụna ugboro abụọ. N'ịga ala bụ mgbe a iche iche ihe nke mmefu. Ghara eweta unforeseen mmefu, ihe niile ikweta n'ọdịnihu na ngo.
Tụlee mee nke ogwugwu onu maka formwork mgbe agbapụtara ntọala.
Aka ma ọ bụ backhoe?
Onye ọ bụla n'ime ndị a na-eru nso ha uru na ọghọm.
Mgbe na-arụ ọrụ aka olulu nwere ike n'ụzọ ziri ezi karị.
Na ala-na-eri oru, na obere ichekwa ikpeazụ eri nke mmepụta site n'aka ogwugwu onu nwere ike ịbụ ihe na-erughị ịgbaziri ihe excavator na ndị ọzọ na ígwè. Mfe mejuputa akara nke na jiometrị nke olulu.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịrịba ichekwa nke ala na-agba nke backhoe bụ mgbe enweta nkwanye. Na nke ọ bụla, mkpebi gị.
Usoro nke earthworks.
Okirikiri nhọrọ ukwuu nke olulu.
Mbụ mkpa ka ị akara a ebe ke olulu ma ọ bụ trenchi. Iji mee nke a, na n'ala mkpọ na a mkpa eriri na-egosi na n'ebe ọrụ. Ịchịkwa jiometrị tụrụ abụọ diagonals nke ga-eme n'ọdịnihu nke olulu - ha ga-dakọtara.
Otú ọ dị, nke a bụ ihe unprofessional ụzọ na adabara marking trenches ma ọ bụ dịtụ ewepụghị ala.
N'ihi na ihe ezi imewe earthworks ndị na-esonụ teknụzụ.
Mgbe ụfọdụ anya si chọrọ ogwugwu onu digged osisi na ogidi, na iche iche nke abụọ (castoffs). Ha eriri na osisi horizontally, nke sere na ụdọ. Mbadamba na-agbalị idozi otu larịị na onye ọ bụla ọzọ.
Site na-akpụ akpụ na ụdọ, nweta kpọmkwem na-akanye. Ndị a na-ajụ-offs n'ọdịnihu eji na kpọmkwem warara ntọala formwork.
Ukwuu mmemmem ọrụ larịị, theodolite, laser teepu ụfọdụ ma ọ bụ laser larịị.
Na a na-adịghị ike ma ọ bụ ubi bukwanu omimi nke ogwugwu onu etinye uche pụrụ iche na nchekwa nke ogwugwu onu. Na nke a, mgbidi nke olulu-eme anaghị akwụ ọtọ, ma na a echiche ọjọọ - iji gbochie N'INYE nkọwa zuru ezu nke ala.
N'akụkụ na ala ala nke olulu larịị akara na okporo ígwè ezuwo.
N'ihi na ezi ihe n'akuku nke 90 degrees na e nwere otu n'ikuku. Triangle na n'akụkụ 3:4:5 mita (ma ọ bụ na n'akụkụ na-multiples nke nọmba ndị a) nwere a 90 ogo n'akuku. Dina n'elu otu akụkụ nke n'akuku nke 3 mita, na ndị ọzọ - 4 na anya n'etiti ihe ga-kpọmkwem 5 mita.